Yahuuda oo jirdil xoog leh U Geysatay Maxbuus Falastiini ah. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
January 19, 2020 8:42 am by admin Views: 98
Qisada dhacdo xanuun badan oo ay Yahuudu kula kaceen maxbuus Muslim, Falastiini ah, ayaa muujineysa iyagoo garaacaya, timaha iyo garka ka jiiradaha oo faraha ka garaacaya una geysanaya dhibaatooyin kale, waxaana muuqaalo arrintan ka marqaati kacaya laga helay qoyskii maxbuuska.
Maxbuuska oo lagu magacaabo Walid Xanaatisha ayaa waxaa lagu jir dilay Xarunta Dambi Baarista Yahuuda. Maxbuuska ayaa caafimaad darro kala kulmay xabsiga kadibna waxaa loo oggolaaday inuu sawirro la wadaago dhaqaatiir taasoo suura galisay in la helo macluumaadka.
Haweeneyda, maxbuuska, waxay la kulantay ninkeeda laba bilood ka hor. Waxay tiri, “Waxaan arkay nin toddobaatan jir ah oo aanan aqoon u lahayn aragga hore … Wuxuu kujiray xaalad qalafsan, indhihiisu way gureen, garkiisiina wuu dhintay, sidoo kale timihiisii, iyo nabar buluug ah oo qoorta ka jaray, cirradiina waxay qariyeen madaxiisa iyo garkiisa,” markaas ayay raacisay, “Ma rumaysan karin in uu ahaa ninkaygii oo soo galay hadda da’daan.
Qaar kale oo kamid ah eheladiisa ayaa waxay faahfaahin dheeri kasii bixiyeen tacdiibka ninkan waxayna sheegeen in si daran looga garaacay wajiga, calaacalaha, gacmaha, dhabarka iyo meelo kale oo jirka kamid ah.
Waliid waxaa waxaa la qabtay sedexdii Oktoobar ee sannadkii la soo dhaafay, isagoo qayb ka ahaa olole lagu soo qabtay daraasiin dad ah oo u ololeeya, shaqaalaha qaybta gaarka loo leeyahay iyo ardayda jaamacadaha, laakin Yahuudu waxay ku eedeynayaan inuu ku lug lahaa qarax lagu dilay 1 askari oo Yahuudi ah.
Xaaska Waliid, oo loo ogolaaday inay la kulanto laba daqiiqo oo keliya, ka dib konton maalmood oo wareysiga ah, ayaa sheegtay iney nabarro badan ka muuqdeen qoortiisa iyo madaxiisa, wuxuuna awooday inuu istaago kaliya derbiga maxkamadda.
Maxbuuska wuxuu xaaskiisa u sheegay, “Waan miyir la’aa, markaa biyo qabow ayaa jidhkayga lagu nadiifiyey oo waan toosay si aan u dhammaystiro garaacista rabshadaha, sidaa darteed waxaan dareemay inaan runtii dhinto ugu yaraan saddex jeer.”
Yahuuda ayaa had iyo goor sidan u tacdiibiya dadka Muslimiinta ah ee Reer Falastiin iyagoo aanan u aaba yeelin waayeel, haween, caruur iyo rag intaba.